TS Eliot. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 nhetembo pfupi | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo waLady Ottoline Morrell.
Thomas StearnsEliot Iye akazvarwa muSan Luis pazuva rakafanana nanhasi muna 1880. Akanga ari mudetembi, mutsoropodzi, uye mupepeti, uye rimwe remanzwi akatanhamara mudetembo reAmerica muhafu yekutanga yezana ramakore rechiXNUMX. Nezve mupiro wake uye hunyanzvi kune iyo genre iye akagamuchira iyo Mubayiro weNobel muna 1948. Nhasi ndinorangarira basa rake na 4 yenhetembo dzake mupfupi.
2 4 nhetembo pfupi
2.1 Maziso andaona nemisodzi
2.2 Gallant hurukuro
2.4 Kwaya yekutanga yedombo
Yakaumbwa mu Harvard, iyo Sorbonne uye Oxford. Aive shamwari yemudetembi zvakare Ezra Pound, izvo zvakamukurudzira kuburitsa vhoriyamu yake yekutanga yenhetembo muEngland, Rwiyo rworudo rwaJ. Alfred Prufrock. Gare gare akazova mugari weBritish.
Mabasa ake anomiririra zvakanyanya ndiwo Makota mana, Gwenga o Kuuraya muKathedral. Uye zvakare akanyora nhetembo dzevana s LBhuku reKunyanzvi Katsi dzekare Possum, kurudziro ye Cats, mumhanzi wakakurumbira zvakanyanya wakatorwa nemunyori Andrew Lloyd Weber.
4 nhetembo pfupi
Maziso andaona nemisodzi
Maziso andaona nemisodzi kekupedzisira
kuno kune imwe nzvimbo yerufu
chiratidzo chendarama chinoonekazve
Ndinoona maziso asi kwete misodzi
uku ndiko kutambudzika kwangu.
Uku ndiko kutambudzika kwangu:
maziso andisingazombooni zvakare
maziso andisingaone kunze kwekunge
pamusuwo weimwe nzvimbo yerufu
kupi, sekune ino
maziso anogara kwechinguva chidiki
chinguva chidiki chinogara kwenguva refu kupfuura misodzi
uye vanotitarisa nekuseka.
Ini ndinocherechedza: «Shamwari yedu ine rudo, mwedzi!
Kana pamwe (zvinonakidza, ndinoreurura)
inogona kunge iri bharumu raPreste Juan
Kana mwenje wekare wakarohwa wakarembera kumusoro
kuvhenekera vafambi varombo mukutambudzika kwavo.
Uyezve iye: "Iwe unopenga sei!"
Uye zvino ini: «Mumwe munhu anoruka pamakiyi
husiku hunofadza, hwatinotsanangura nahwo
husiku uye chiedza chemwedzi; mimhanzi yatinobata
kugadzirisa kusakosha kwedu pachedu.
Uye iye ndokuti: "Unoreva ini?"
"Haiwawo, ndini ndiri inane."
«Iwe, mukadzi, ndiwe wekusingaperi humorist,
muvengi wekusingaperi wemhedziso,
Kupa kusanzwisisika kwedu kusanzwisisika!
nemhepo yako isina basa uye isingakendenga
kuramba kamwechete vadetembi vedu vanopenga.
Uye "Asi isu tiri zvakakomba here?"
Vakaona Netherlands, vadzokera kuHighlands;
asi humwe husiku hwezhizha, heino ivo Ravenna,
kunyatsogadzikana pakati pemashizha maviri, uko mazana maviri enhata;
ziya zhizha uye hwema hwakasimba hwehunhu.
Ivo vari kumusana kwavo, nemabvi avo ari oga,
makumbo mana akazvimba nekurumwa.
Ivo vanokanda kumashure machira uye vanoshandisa zvipikiri zvavo zviri nani.
Isingasviki yeligi iSan Apolinario-
en -Class, a basilica yevanogadzira,
acanthus misoro inovhundutswa nemhepo.
Vachatora chitima cheawa neawa masere uye kubva kuPadua
vachatora nhamo dzavo kuenda kuMilan,
zviripi kudya kwemanheru neresitorendi yakachipa.
Anofunga nezano, anoita math.
Vachave vaona Switzerland uye kuyambuka France.
Uye Mutsvene Apollinarius, kurudyi uye kusagadzikana,
fekitori yekare yaMwari isina hukama, ponesa
ichiri mumatombo ayo ichidonha chaiyo fomu yeByzantium.
Kwaya yekutanga yedombo
Gondo rinobhururuka kumusoro kwedenga,
muvhimi nepaki vanosangana nedenderedzwa ravo.
Ah kusingachinji shanduko yenyeredzi dzakaumbwa!
Iwe chisingaperi sosi yemwaka wakatemwa!
O nyika yezhizha uye matsutso, yerufu uye yekuzvarwa!
Iko kusingagumi kutenderera kwemazano nezviito,
kusingaperi kugadzirwa, kuyedza kusingaperi,
inounza ruzivo rwekufamba, asi kwete runyararo;
ruzivo rwekutaura, asi kwete rwekunyarara;
zivo yeshoko neshoko kusaziva.
Ruzivo rwedu rwese rwunotiswededza padhuze nekusaziva kwedu,
kusaziva kwedu kwese kunotiswededza pedyo nerufu,
asi kuswedera kwerufu hakuswededze padyo naMwari.
Hupenyu hwatakarasikirwa nahwo huri kupi?
Uripi huchenjeri hwatakarasa mukuziva?
Riripi ruzivo rwatakarasa ruzivo?
Kutenderera kwekudenga mumakumi maviri emakore
vanotiparadzanisa naMwari uye vanotiswededza pedyo neguruva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » TS Eliot. Chiitiko chekuzvarwa kwake. 4 nhetembo pfupi